I-Wholesale Supply Frozen Blue Wave - i-Messina
Thenga ukudla okubandayo kwebhizinisi lakho!
4.7 /5 amavoti (amavoti angama-16)
I-Wholesale Frozen Blue Wave a Messina yinkampani esebenza Ukudla okubandayo, Okhilimu beqhwa kufaka phakathi, ukuvumela amabhizinisi ukuthi abe nawo Nikeza kwanele Ukudla okubandayo futhi, uma uceliwe, wenza ukulethwa ekhaya. Ukuhambisa kulo lonke i-Italy.
I-Wholesale Frozen Blue Wave eMessina - Ice Cream and Frozen
I-Wholesale Frozen Blue Wave yinkampani ye Messina abaneminyaka eminingi nesipiliyoni ku Nikeza di Ukudla okubandayo kunoma yiliphi ibhizinisi elidingayo Ukudla okubandayo ukuhlala ulungele efrijini uma kwenzeka. Blue wave kungukuthi Frozen Wholesale okusobala nokuthi iyathengisa Okhilimu beqhwa a Messina unyaka wonke, ilusizo kulabo abanendawo yokudlela ngokwesibonelo. I-Wholesale Frozen Blue Wave inikeza ukukhetha okuningi kwemikhiqizo Ukudla okubandayo ukwenza izindlela zokupheka eziningi ezihlwabusayo noma ukumane nje kufuthelwe kuhhavini ukuze izitsha zokudla zisheshe ukudliwa emgqonyeni isibonelo Messina ngekhefu lasemini.
I-Wholesale Frozen Blue Wave eMessina - Iqanjwe ngumsebenzi
I-Wholesale Frozen Blue Wave kuse Messina indawo efanelekile yokuthola eyodwa Nikeza di Ukudla okubandayo ngebhizinisi lakho. Iyatholakala ezitolo ezinkulu, ezitolo zokudla, imigoqo, ama-patisseries, ama-catering, izindawo zokudlela kanye neminye imisebenzi yokupheka nokusabalalisa, I-Wholesale Frozen Blue Wave e-Messina ikhambi elilula kakhulu Nikeza di I-Frozen ne-Ice Cream ngamanani angenakuphikwa, ngoba labo abathenga ngamanani amakhulu ngokuqinisekile abakwazi ukusebenzisa imali enkulu. Thembela I-Wholesale Frozen Blue Wave e-Messina ngoba i Ukudla okubandayo ukuthi udinga.
Bheka amakhathalogi ethu:
I-Wholesale Frozen Blue Wave eMessina - Supply for Imisebenzi Yezentengiso
Phakathi Ukudla okubandayo ngokuqinisekile awukwazi ukuphuthelwa Okhilimu beqhwa, okubalulekile kunoma yimuphi umsebenzi ophathelene nokudla. Frozen Wholesale ukuphatha, phakathi kweminye imikhiqizo, i Okhilimu beqhwa USammontana, waziwa ngobuhle bawo. Ngamafuphi, isiqinisekiso sokwethenjwa se Nikeza di Okhilimu beqhwa a Messina da Frozen Wholesale. Xhumana nabo ukuze uthole stock on Okhilimu beqhwa: ihlobo alikho kude kangako! Ama-oda asheshayo nekhwalithi asuka I-Wholesale Frozen Blue Wave.
I-Wholesale Frozen Onda Blu Supply yokudla eqandisiwe eMessina - Ukulethwa kwasekhaya
TheI-Wholesale Frozen Blue Wave ngo-del del Santo a Messina inikeza insiza yokulethwa ekhaya ukuvumela amakhasimende ukuthola i Okhilimu beqhwa noma eminye imikhiqizo Ukudla okubandayo ngaphandle kokushiya ikhaya. Futhi ukulethwa ekhaya kwe Nikeza di Ukudla okubandayo ayitholakali kuphela ngaphakathi Messinaeqinisweni, kwezinye izindawo zase-Italy kukhona izithunywa I-Wholesale Frozen Blue Wave kuhamba ngomkhumbi ezweni lonke. Okhilimu beqhwa e Ukudla okubandayo ukuthi uye ngqo lapho unebhizinisi lakho naye I-Wholesale Frozen Blue Wave e-Messina.
I-POSTAL CODE: 98148
Umakhala ekhukhwini: 320 5724499
Umakhala ekhukhwini: 340 7866608
Umakhala ekhukhwini: 320 8377033
Inombolo ye-VAT: 03330170832